महिला उद्यमशिलता र विकासमा विषयमा मेरो ध्यान रहनेछ संगिता सवेदी –उपाध्याक्ष (वाणिज्य) पदका उम्मेदवार – Dainikujyaalo
दैनिक उज्यालो । २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार मा प्रकाशित
कोहलपुरमा २० वर्षदेखि कपडा व्यवसाय गर्दै आईरहेकी संगीता सुवेदी भाेली २२ गते हुन गइरहेकाे काेहलपुर उधाेग व्यापार संघमा बाणिज्य तर्फकाे उपाध्यक्ष पदकी उमेदवार हुन।व्यवसायिक जीवनसँग सँगै उनी सामाजिक कार्य र समाजसेवामा अग्रसर हुँदै विभिन्न संघसंस्थाहरुमा आवद्ध भई सफल नेतृत्व प्रदान समेत गरिसकेकी छिन् । सुवेदी कोहलपुर जेसीज वर्ष २०१९ को अध्यक्ष जस्तो पदमा रहि उनले जेसीजमा आवद्ध यूवाहरुलाई सफल नेतृत्व प्रदान गरेकी हुन् । त्यस्तै उनी लायन्स क्लब अफ कोहलपुर कस्तुरीको अध्यक्ष भई विभिन्न सामाजिक कार्यहरु गरिरहेकी छिन् ।
काेहलपुर उधाेग व्यापार संघकाे निर्वाचनकाे सेराेफेराेमा रहेर उपाध्याक्ष (वाणिज्य) पदका उम्मेदवार संगीता सुवेदी शीत गरिएकाे कुराकानी।
१.तपाईको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ?
चुनावमा भोट मागेरै पाउने कुरा रहेछ । त्यसैले हामीले व्यवसायीहरुलाई भेट्ने क्रममालाई निरन्तर जारी राखेका छौ । प्रत्येक व्यापारीहरुको मत जितेर अघि बढ्दै छौ । हाम्रो समूह पनि युवाहरुको बाहुल्य भएको समूह छ । म आफै पनि लामो समय समाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल छु । मलाई र मेरो समूहलाई भोट गर्नको लागि उहाँहरुको मन जित्ने अभियान चलिरहेको छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक समूह त्यसरी नै अघि बढिरहेको छ ।
२.उपाध्यक्ष पदका लागि एकमात्र महिला उम्मेदवार हुनुहुनछ, के भन्नुहुन्छ मतदाताहरुले ?
एकदमै राम्रो रेसपोन्स पाइरहेको छु । उहाँहरुले मलाई किै हौसला प्रदान गर्नु भएको छ । भोट गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुहुन्छ । कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासमा पहिलोचोटी र बाँके जिल्लामा पनि पहिलो उम्मेदवारका रुपमा म रहेको छु । त्यसो भएको हुनाले व्यक्तिगत रुपमा महिला र अवसर र चुनौती दुवै छ । पहिलो कुरा मैले जितेर देखाउनु पर्नेछ । मतदाताको मन जित्नु छ भने अर्कातिर मेरा प्रतिष्पर्धी पुरुष हुनुहुन्छ । त्यो भएको हुनाले हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत छौ । हार र जित र निश्चित छ नै एक जनाले हार्ने पर्छ । त्यसैले मेलै हार्छु जस्तो लागेको छैन । मलाई मेरा प्यारा मतदाताहरुले जिताउनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु । म लामो समयमा यसैमा काम गरेको मान्छे । म जेसीज, लायन्स लगायतका सामाजिक क्षेत्रको नेतृत्व समेत गरिरहेको छु । त्यसैले सबैले महिला पनि हो । उत्साह र जाँगर पनि छ भने मलाई हौस्याउनु भएको छ ।विशेष गरी महिला दिदि बहिनीहरुले पनि तपाईलाई जिताउने जिम्मा हाम्रो भयो, अब हाम्रा कुरा पनि सुनेन भए भनेर खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ । धेरै महिलाले आफ्नो सहभागिताका रुपमा लिएको छ ।
३.तपाईले चुनाव जित्नुभयो भने यहाँहरुका महिलाहरुका विषयमा के के काम गर्नुहुन्छ ?
कोहलपुर आफैमा एक रणनीतिक क्षेत्र हो । यहाँ धेरै वर्गको बसोबास रहेको छ । हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढिरहेको छ । मैले सबैलाई भन्ने गरेको छु । मलाई अवसर दिनुस । म तपाईहरुको विषयमा काम गर्नेछु । किनभने मेरो व्यक्तिगत जीवन भन्ने छैन । लामो समय महिला अधिकारका लागि अघि बढेको मान्छे पनि हो । अहिले पनि महिलाहरुकै लागि लडिरहेको छु । संघमा जितेर व्यवसायी महिलालाई थप व्यपस्थित बनाउन म लागि पर्नेछु । आर्थिक रुपमा महिलालाई सवल बनाउन मेरो पहल हुनेछ । अर्कातिर महिला हिंसा अहिले पनि बिकराल समस्याका रुपमा रहेको छ ।यस क्षेत्रबाट त्यस्ता समस्याहरुको समाधानको लागि पनि मेरो भूमिका हुनेछ । महिलाहरुका सवालहरुलाई शीरमा राखेर अघि बढ्नेछु । महिला उद्यमशिलता विकासमा मेरो ध्यान रहनेछ । विना धितो व्याज दिएको छ । तर धेरै कुरा महिलालाई नै जानकारी छैन । मलाई निर्वाचित गराएर पठाउनुभयो भने त्यस्ता उद्यमशिल कार्यक्रममा व्यवसायीहरुलाई सहभागी गराउने, आर्थिक पाटो बलियो बनाउन तथा नेतृत्वदायी महिला उत्पादन गर्ने पहल हुनेछ । राज्यले दिएको सुविधाबाट बन्चित हुनेछ । प्रत्येक महिला व्यवसायी होस । अरुको भर पर्न नपरोस । यो लागि मेरो भूमिका हुनेछ ।पहुँच विहीनहरुको लागि सहयात्री बन्नेछु ।मेरो उम्मेदवारी नै व्यवसायिक एकता र महिला उद्यमशिलता भन्ने हो । संघको नीति र नियममा रहेर काम गर्नेछु । धेरैलाई धेरै कुरा जानकारी गराउने छु । केन्द्रमा समेत महिलाहरुको पहुँच विस्तार हुनेछ । विजय भएमा काम गरेर देखाउने छु ।
४.लोकतान्त्रिक समावेशी व्यवसायी समूहलाई मतदात गर्ने आधार के के हुन् ?
समग्रमा हाम्रो टिम नै युवाहरुको बाहुल्य भएको छ । यहाँको संघलाई हाक्न सक्ने क्षमता भएका धेरै जना साथीहरु हुनुहुन्छ । अर्कोतिर हामीले समावेशी उद्योग वाणिज्य संघको कल्पना गरेका छौ ।जुन हाम्रा उम्मेदवारीले समेत पुष्टि गरेको छ । हामीलाई कोहलपुर क्षेत्रको व्यवसायिक अग्रगमनका लागि भोट गर्नुपर्छ । किन भने हामी महिलाहरु पनि पहिलोपटक पदाधिकारीमा छौ । त्यसैले हामीलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नको लागि पनि जिताउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो टिमले महिलाहरुलाई सम्मान दिएको छ । बजारमा हिड्दै गर्दा पनि धेरै महिलालाई भोट दिने कुरा गरिरहनु भएको छ । अझ पुरुषसँगको प्रतिष्पर्धाका कारण पनि मलाई मतदाताहरुको सहानुभूति छ । त्यसैले मैले पनि धेरै समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव पनि छ । हाम्रो समूहको सिता कार्की पनि कोषाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार बन्नु भएको छ । लोकतान्त्रिक समूहले जित्नेमा सम्पूर्ण मतदातालाई २२ गते विहान ८ बजेदेखि मतदान छ । तपाईहरु त्यसमा सहभागी भइदिनुहोला भन्न चाहन्छु । समयमा आइदिनुहोला । मेरो विनम्र आग्रह के छ भने हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छेलाई मतदान गरिदिनुहोस , जिताइदिनुहोला । उद्योग वाणिज्य संघको लागि हक र हितमा काम गर्ने मानिसलाई छानीदिनुहोला । नीति हेरेर आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नु होला । मेरो बाचा के छ भने तपाईहरुले मलाई विस्वासका साथ जिताउनु भयो भने, तपाईहरुको आशालाई निराशामा पणिनत गर्न दिनेछैन । तीन वर्षमा काम गरेर देखाउनेछु ।